ကုမ္ပဏီ: BedRoc မှတ်တမ်း
Location: တောင်ပေါ်က Vernon NY US
ယုတ္တိဗေဒ9နှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှု +
Protools နှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှု HD 8+
ထိုကဲ့သို့သောဂီတမှတ်တမ်းတင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဆန္ဒရှိသံကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာထုတ်လုပ်သူများ, အဆိုတော်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ 1) ကွန်ဖရ။
2) ရောနှောခြင်းနှင့်အသံ, သီချင်း, အသံရောစပ်ပျဉ်ပြားကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုနှင့် prerecorded ဖြစ်ရပ်များအတွက်သံကိုသက်ရောက်မှု taped တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
အသံဖမ်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်း, မီဒီယာမှတ်တမ်းတင်အပေါ် 3) Record ကိုမိန့်ခွန်း, ဂီတ, နှင့်အခြားအသံများကို။
4) ထိန်းချုပ်မှု consoles စသုံးပြီး recording ကိုအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအသံအတိုးအကျယ်အဆင့်နှင့်အသံအရည်အသွေးထိန်းညှိ။
5) သည်အသံတည်းဖြတ်ရေးနှင့်ပုံတူပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. မူရင်းမှတ်တမ်းတင်မီဒီယာကနေသံကိုအသံသွင်းမျိုးပွားခြင်းနှင့်ပွား။
6) သီးခြားတူရိယာ, အသံများနှင့်အခြားအသံများကို, ထို့နောက်ရောစပ်သို့မဟုတ် Post-ထုတ်လုပ်မှုဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းနောက်ပိုင်းတွင်အသံပေါင်းစပ်။
7) စမ်းသပ်ထ Set များနှင့်အသံဖမ်းအစည်းအဝေးများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာများညှိ; အဖြစ်အပျက်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြိုဖျက်။
8) ထိန်းချုပ်မှု consoles စသုံးပြီး prerecorded တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး, ဂီတ, နှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားညျဘဏ်ဍာအမြင်အာရုံအရေးယူမှုနှင့်အတူအသံကသက်ရောက်မှုထပ်တူကျအောင်နှင့်ညီမျှ။
9) ဂီတစီမံကိန်းများ, ကြော်ငြာသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင် Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဂီတတူရိယာဒစ်ဂျစ်တယ် interface ကိုအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးပါ။
တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-04-26